Ụlọ ọrụ marble Green - Ndị na-emepụta marble green China, ndị na-eweta ya
Marmo verde alpi scuro gbara ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mabụ maka countertop
Omuma gbara ọchịchịrị verde alpi marble, nke nwere nnukwu ma ọ bụ nke pere mpe nke veining akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ;ọ bụ nkume a nụchara anụcha nke ukwuu nke na-etinye onwe ya na ngwa ime ụlọ dịka ala, mgbidi mgbidi na steepụ.
Marble green namibe ọhụrụ translucent maka ala ala
Marble namibe ọhụrụ bụ marble akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.Ọ bụ otu n'ime ụzọ mgbanaka ala kacha sie ike na nke na-adịte aka.
okomoko ọcha mma ice jade green marble maka ime ime
Mabụl jade ice nwere ụkpụrụ emerald ma bụrụ marble eke dị ọcha nke ukwuu.Ọ bụ mabụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma nke ga-eme nkwupụta.N'azụ nkume a na-acha ọcha, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ veining.
Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ na-egbu maramara ọhụrụ akpụrụ akpụ mabụl akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka mgbidi
Enwere isi ụzọ abụọ nke marble akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akpụrụ akpụ: otu bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke, nke mara mma n'ozuzu ya dị ka nnukwu Milky Way, brushwork eke freehand, na-agbanwe na free, chọọ ebe obibi dị mfe ma mara mma, nke doro anya na mara mma;
Taịlị mgbidi Marble ọcha, Black Granite, Granite odo odo, Gray Gray dị ọkụ, Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ, Gray Granite,